Usain Bolt oo kala dooran waayay Ronaldo iyo Messi, laakiin sheegay waxa uu Kabtanka Portugal kaga wanaagsan yahay midka Argentina – Gool FM
Usain Bolt oo kala dooran waayay Ronaldo iyo Messi, laakiin sheegay waxa uu Kabtanka Portugal kaga wanaagsan yahay midka Argentina
Haaruun April 8, 2021
(Yurub) 08 Abriil 2021. Ninka ugu dheereeya Adduunka ee Usain Bolt ayaa kala doowan waayey xiddigaha dunida kubadda cagta maamulaya ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, laakiin waxa uu xusay waxa uu weeraryahanka Juventus kaga fiican yahay kabtanka Barcelona.
Usain Bolt ayaa indhaha ku haya inuu ogaado waxa uu mustaqbalka soo wado xiddiga da’da yar ee Kylian Mbappé, waxaana uu sharraxay sababta uu isagu Cristiano Ronaldo uga door-bidayo Lionel Messi.
Halyaygan Orodyahanka ah ayaa wareysi uu siinayey Jariiradda Talyaaniga ah ee La Gazzetta dello Sport ayaa ka hadlay arrimo kala duwan, waxaana uu ku biiray doodda aan dhammaadka lahayn ee ku sabaabsan Weeraryahanka Juventus iyo midka Barcelona.
“waa ay adag tahay inaan kala doorto, maxaa yeelay anigu taageere ayaan u ahay Argentina, laakiin sidoo kale waxaan taageere weyn u ahay Cristiano Ronaldo” ayuu yiri Bolt.
“Waxaan la dhacsanaa Ronaldo tan iyo markii uu u ciyaarayey Manchester United, maxaa yeelay waxaan taageere u ahay Red Devils, waxaana u malaynayaa isagu inuu haysto wax ka badan Messi, sababtoo ah waxa uu isku caddeeyey horyaallo badan, sidaa darteed waxaan qaatay Ronaldo.
“Si kastaba waxaa jira xiddigo badan oo da’yar ah oo soo jiidasho leh, Mbappé tusaale ahaan, waxaan rabaa inaan ogaado mustaqbalka ku keydsan hibada xiddigahan da’da yar.”
Kooxda Arsenal oo dib u soo cusboonaysiisay doonistii Wilfried Zaha... (Imise milyan ayay ku doonaysaa?)